Horizon Chase – Kubiridzira&Kugura – Android Cheats Matipi
Horizon Chase – Kubiridzira&Kugura
HORIZON CHASE CHIKONZERO KUMITAMBO YECHIRASSIC ARCADE RACING.
Horizon Chase itsamba yerudo kune vese retro racing gamers. Iwo mutambo wekupindwa muropa wemujaho wakafemerwa nemahits makuru e80's uye 90's.. Imwe neimwe curve uye yega yega muHorizon Chase gadzira zvekare arcade racing gameplay uye inokupa iwe isingabhadharwe yekumhanya miganho yekunakidzwa.. Full throttle on uye unakirwe!
• 16-BIT GRAPHICS AKATSVANDUDZWA
Horizon Chase inodzosa iyo graphic mamiriro eiyo 16-bit chizvarwa uye inogadzira chimiro chakafemerwa munguva yakapfuura pasina kurega kuenda kunoenderana neayo.. Iyo inooneka polygon uye yechipiri ruvara aesthetic inosimbisa kunaka kwekuona kwemutambo, zvichiita kuti pave nemhepo yakasiyana uye inowirirana. Iwe uchanzwa retro mujaho mweya wemutambo pane muviri wemazuva ano wakazara.
• KUSHANYA KUBVA MUNYIKA YENYIKA
Horizon Chase mujaho kutenderera pasirese. Nemukombe mutsva wega wega, iwe unotyaira mota yako nemujaho unoshamisa, kuona zuva richinyura, yakatarisana nemvura, chando, madota egomo rinoputika uye kunyange madutu makuru ejecha. Ngave masikati kana husiku track yega yega inoitika mumapositadhi akanaka kubva pasirese.
• SENNA FOREVER EXPANSION Pack – RUKURUDZWA ZVIKURU ZVINHU AYRTON SENNA
Kuremekedza kune ane mukurumbira mutyairi Ayrton Senna, iyi Expansion Pack inounza seti nyowani yemota, tracks, uye maitiro emutambo, yakafuridzirwa nebasa raSenna.
Horizon Chase inopa Barry Leitch, muimbi ari seri kwezviridzwa zvemitambo yemujaho weArcade. Paunenge uchitamba mutambo wacho, iwe unozopedzwa nenziyo dzake dzinoyevedza dzinorumbidza graphical ecstasy yenzvimbo yega yega.
Usakanganwa kutitevera pasocial media:
Chikamu: Kubiridzira uye Kubiridzira kana Matipi Matagi: Chase, CheatsHack, Horizon
← Candy Crush Jelly Saga – Kubiridzira&Kugura Oiri Tycoon: Gasi Idle Factory Cheats&Kugura →